Email Vendor Mutengo Wemitero
Iyo Email Service Inopa SaaS Mutengo Wemutengo
Chitatu, Nyamavhuvhu 7, 2013 Chitatu, Nyamavhuvhu 7, 2013 Douglas Karr
Isu takave nekumwe kukwira uye kuderera apo isu tichitsvaga wakanaka email sevhisi webasa. Vazhinji vanopa maemail vanopa chete havana zvishandiso zvekubatanidza zvatinoda kuti titumire email yedu inotumira (tichava nedzimwe nhau pamusoro pazvo munguva pfupi iri kutevera)… asi dambudziko hombe ratakatarisana naro nepurogiramu yedu yeemail kugona kuenzanisa kuita mari ne mutengo wekushandisa.
Kuti usvike padanho chaipo, mamwe SaaS mitengo yemitengo ingori benzi ... kuranga kukura kwekambani yako pane kuikomborera. Zvandinotarisira sebhizinesi kana mutengi ndezvekuti ini pandinoshandisa sevhisi yako, mari yemubhadharo inofanirwa kuramba yakati sandara kana kuvandudza (mune mamwe mazwi - mutengo wekushandisa unogara wakafanana kana kudzikira). Izvi hazvishande nematanho-akatsika mitengo yaunowana - kunyanya nevatengesi veemail.
Heano mumwe mutengesi wemutengo weveruzhinji (Mutengo weMwedzi nemwedzi uye Vanyoreri):
Pakutanga kuona, zvinoita kunge zvinowirirana… vazhinji vanyoreri vanowedzera mutengo mukuru wemwedzi. Dambudziko riri pane shanduko, zvakadaro. Ngatitii ndiri kutumira kune vanyoreri ve9,901. Ndiyo $ 75 pamwedzi. Asi kana ndikawedzera vanyori zana, ndiri mudambudziko. Mari yangu yemwedzi nemwedzi inopetwa kaviri kusvika pamadhora zana nemakumi mashanu uye mutengo wemubhadhari unowedzera 100%. Pamunhu anonyorera, mutengo wekushandisa sisitimu unenge wakapetwa.
Izvi zvaive zvakashata nemutengesi wedu wazvino zvekuti ndakamira chaiko kutumira kune yangu yese runyorwa. Mari yedu yakabva pamadhora chiuru pamwedzi kusvika pamadhora zviuru mazana maviri nemazana mashanu pamwedzi nekuti ndaive nevanyoreri zana nemakumi masere Hazvireve kuti ini ndinofunga kubhadhara zvakanyanya kutumira zvakanyanya… zviri chaizvo kuti kune nhanho-nhanho mumitengo iyo yandisingakwanise kudzorera kuburikidza neyedu yekushambadzira kuedza kana kutsigira Pamubhadhari, mari yangu ingadai yakapetwa kaviri. Uye ini handigone kudzorera iyo mari.
Software sevashandi veSevhisi vanofanirwa kunyatso tarisa pamubhadharo-wega-mashandisiro sisitimu seAmazon kana kuitisa mapakeji ane zvikumbaridzo uko mutengo unodonha paunokura bhizinesi rako. Iwe unofanirwa kupa mubayiro bhizinesi riri kukura, kwete kuriranga. Kana ndine runyorwa rwe101,000, mumwe mutengi ane runyorwa rwezviuru zana haafanire kunge achibhadhara zvishoma pamubhadhari kupfuura ini. Izvo zvoga mbeveve.
Kukurudzira Email Chikamu uye Kuzvigadzirisa
Imwe nyaya nemaitiro aya ndeyekubhadhara iyo nhamba yevanofambidzana mune yako system pane kuti imarii yaunotumira nayo. Kana ini ndine dhatabhesi yemamirioni email kero, ini ndinofanira kukwanisa kuendesa kunze, kuiganhura uye kutumira kune iyo chete chikamu chandinoziva ichapa chikuru kuita.
Mazhinji eaya masisitimu anobhadharisa nehukuru hwe database yako pane kushandisa kwako sisitimu. Uine izvo mupfungwa, ungapa sei mhosva kumakambani ebatch uye blast mushandirapamwe? Kana iwe uchizobhadhariswa kune vese vanyoreri, iwe unogona zvakare kutumira kune wese anotinyorera!
Nekuda kwemutengo uyu, makambani aya ari kumanikidza ruoko rwangu. Kunyange ini ndingangoda mutengesi uye ndichikoshesa basa ravo, mari yebhizimusi inorayira kuti ndiendese bhizinesi rangu kumwe kunhu. Ndichiri kuda kunamatira nemutengesi akanaka, ini handina poto yemari yekuenda kunopinda mukati kana ini ndikawedzera vanyori zana kudhatabhesi yangu.
Tags: email mutengoemail mitengoemail tumira mutengoemail service provideremail mutengesi
Ndeipi iyo Yakanakisa IT Nharaunda yeBhizinesi Rangu?
Mamwe Dhata, Mamwe Matambudziko